ဇော်ဂျီ (စာရေးဆရာ) - ဝီကီပီးဒီးယား
(1907-04-12)၁၂ ဧပြီ၊ ၁၉၀၇
ဖျာပုံမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဗြိတိသျှဘားမား
၂၆ စက်တင်ဘာ၊ ၁၉၉၀(1990-09-26) (အသက် ၈၃)
ဇော်ဂျီ (ဧပြီလ ၁၂၊၁၉၀၇- စက်တင်ဘာ၂၆ ၁၉၉ဝ) သည် မြန်မာနိုင်ငံသား စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာ၊ ဂုဏ်ထူးဆောင် မြန်မာစာပါမောက္ခ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ မြန်မာစာပေ၏ ထင်ရှား​သော စာပေလှုပ်ရှားမှုတစ်ရ​​ပ်ဖြစ်သည့် ခေတ်စမ်းစာပေ လှုပ်ရှားမှုကို ဦးဆောင်ခဲ့သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ ဆရာဇော်ဂျီသည် ကဗျာ၊ ဝတ္ထု၊ ပြဇာတ်၊ ရသစာတမ်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အနုပညာနှင့် စာပေဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ၊ဘာသာပြန် စသော စာပေများကို ရေးသားခဲ့သည်။
၅ ဆရာ ဇော်ဂျီ၏ မျိုးရိုးဗီဇ
၆ ဆရာ ဇော်ဂျီ ငယ်စဉ် အခါက ပညာရှာ ခဲ့ရပုံ
၇ ဆရာဇော်ဂျီနှင့် ဟံသာ့ကြေးမုံ
၈ ဆရာ ဇော်ဂျီနှင့် ကလောင်အမည်
၉ ဆရာ ဇော်ဂျီ၏ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ဘဝ
၁၀ ဆရာ ဇော်ဂျီနှင့် ကျောင်းဆရာ ဘဝ
၁၁ ဆရာ ဇော်ဂျီနှင့် ရွှေပြည်စိုး
၁၂ ဆရာ ဇော်ဂျီနှင့် လက်ရွေးစင် ကဗျာ စကားပြေ
၁၃ ဆရာ ဇော်ဂျီနှင့် အလယ်တန်း ကဗျာများ ဝေဖန်ချက်
၁၃.၂ လှိုင်းကလေး သင်
၁၃.၃ အင်းလေး လူရည်ချွန် စခန်းမှာ
၁၃.၄ ရှေးခေတ် ပုဂံပြည်
၁၃.၅ ၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေး အတွေး
၁၃.၈ တခုသော သင်္ကြန်ခါ
၁၃.၉ အို တက်လူတို့
၁၃.၁၄ မွန် ဝန်ကြီးနှင့် မြန်မာ စကားပြေ
၁၃.၁၅ ကဗျာဝိုင်း စာဝိုင်းနှင့် ကျွန်တော်
၁၃.၁၆ နွေဦး ကျက်သရေ
၁၃.၁၈ ပုဂံ ဈေး
၁၃.၁၉ ဇာတိမာန် စာဆို ဦးလွန်း
၁၃.၂၁ မဟာ ဆန်ချင်သူ ပြဇာတ်
၁၄ ဆရာ ဇော်ဂျီနှင့် စာဖတ်ဝိုင်း
၁၅ ဆရာ ဇော်ဂျီနှင့် ဆရာကြီး ဦးဖေမောင်တင်
၁၅.၁ ချက်နိုင်ငံမှ အမျိုးသမီး စာပေသုတေသနပညာရှင် ဒဂ္ဂမာဘက်ကိုဗာ(မြန်မာအမည်-မြသီတာ)
၁၆ ဆရာဇော်ဂျီနှင့် စာပေအမြင်
၁၇ ဆရာဇော်ဂျီ လေးစားသော စာဆိုနှင့် စာပေ
၁၈ ဆရာဇော်ဂျီနှင့် စာပေအယူအဆ
၁၉ ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် စာအုပ်များ
ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဖျာပုံမြို့ဇာတိဖြစ်၍ အဖဦးယော၊ အမိဒေါ်စိန်ညွန့်တို့မှ ၁၉၀၇-ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၂ရက်၊ သောကြာနေ့တွင် ဖွားမြင်သည်။ မွေးချင်းကိုးယောက်အနက် အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ အမည်ရင်းမှာ ဦးသိန်းဟန် ဖြစ်သည်။
ဆရာဇော်ဂျီသည် ငယ်စဉ်က ဖျာပုံမြို့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ ဆရာဇော်ဂျီတို့အိမ်တွင် လူကြီးများစုဝေးကာ စာအကြောင်း၊ ပေအကြောင်း ပြောကြသောကြောင့် ဆရာဇော်ဂျီသည် ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကပင် မြန်မာမှု၊ မြန်မာစာပေတို့နှင့် အကျွမ်းတဝင် ရင်းနှီးခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဖျာပုံမြို့ရှိ အင်္ဂလိပ်မြန်မာ အစိုးရအထက်တန်းကျောင်းတွင် သတ္တမတန်းအထိ ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ သတ္တမတန်းအရောက်တွင် ၁၉၂ဝ ပြည့် ပထမကျောင်းသားသပိတ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ အမျိုးသားကျောင်းများ မြန်မာပြည် အနှံ့ပေါ်ပေါက် လာသောအခါ ဆရာဇော်ဂျီသည် ဖျာပုံမြို့၊ အမျိုးသားကျောင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ ပညာဆည်းပူးခဲ့သည်။ ထိုမှတဖန် ရန်ကုန်မြို့၊ မြို့မ အထက်တန်းကျောင်းသို့ ပြောင်း၍ ၁၁ ဆင့် အောင်သည်အထိ ပညာဆည်းပူးခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးမှာ ဦးဘလွင် ဖြစ်သည်။
ဆရာဇော်ဂျီသည် ၁၉၂၉-၃ဝ ပညာသင်နှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ ရခဲ့သည်။ ဆရာဇော်ဂျီသည် မိမိ ပညာဆည်းပူးခဲ့ရာ ရန်ကုန်မြို့၊ မြို့မ အထက်တန်းကျောင်းတွင် အထက်တန်းပြဆရာအဖြစ် ၁၉၃၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၃၄ ခုနှစ် အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ကျောင်းဆရာလုပ်နေစဉ်မှာပင် ဖျာပုံမြို့၌ ၁၉၃၁ ဇန်နဝါရီလမှစ၍ ထုတ်ဝေခဲ့သော 'မြန်မာ့အာဇာနည်' ဂျာနယ်တွင် ဆရာဇော်ဂျီသည် အယ်ဒီတာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဂျာနယ် (၇)စောင်မျှသာ ရေးသားထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့ပြီး ဖြန့်ချိမှု အခက်အခဲကြောင့် ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရသည်။ မြို့မကျောင်း ကျောင်းဆရာအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ဆရာဇော်ဂျီသည် ဝိုင်အမ်ဘီအေ အသင်းကြီးက ကြီးမှူးကျင်းပသော ဟောပြောပွဲတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် စာပေဝေဖန်ရေး စာတမ်းတစ်စောင် ဖတ်ကြားတင်သွင်းခဲ့သည်။ စာဆိုဝန်ကြီးပဒေသရာဇာနှင့် စိန္တကျော်သူ ဦးဩ တို့အကြောင်း ဖြစ်သည်။ စာတမ်းအမည်မှာ Eighteenth Century Poets in Burma ဖြစ်သည်။
ဆရာ ဇော်ဂျီ၏ မျိုးရိုးဗီဇ[ပြင်ဆင်ရန်]
ဆရာ ဇော်ဂျီ ငယ်စဉ် အခါက ပညာရှာ ခဲ့ရပုံ[ပြင်ဆင်ရန်]
ဤကား ဆရာ ဇော်ဂျီ မြို့မ ကျောင်းတွင် ပညာ သင်ယူ နိုင်ရန် ကြိုးစား ခဲ့ရပုံ အကြောင်း ဖြစ်သည်။"
ဆရာ ဇော်ဂျီနှင့် ကလောင်အမည်[ပြင်ဆင်ရန်]
ဆရာ ဇော်ဂျီ၏ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ဘဝ[ပြင်ဆင်ရန်]
ဆရာ ဇော်ဂျီနှင့် ကျောင်းဆရာ ဘဝ[ပြင်ဆင်ရန်]
"ဘီ အေ အောင်တော့ ဆရာ့ ရည်ရွယ်ချက်က ကျောင်းဆရာ ဖြစ်ဖို့ ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဘီ-အေ ဂုဏ်ထူးတန်းကို မတက်ဘူး။ ကိုယ်နေ ခဲ့တဲ့ မြို့မ ကျောင်းမှာ ကျောင်းဆရာ ဝင်လုပ်တယ်။ မြို့မကျောင်း ကျောင်းဆရာ ဘဝနဲ့ 'စိန္တကျော်သူနဲ့ ဝန်ကြီး ပဒေသ ရာဇာ' အကြောင်းကို အင်္ဂလိပ်လို စာတမ်း ရေးပြီး ဝိုင်-အမ်-စီ-အေ (Y.M.C.A) မှာ ဖတ်တယ်။ ဒီတုန်းက ထုတ်တဲ့ Evening Paper သတင်းစာမှာ စာတမ်းကို ထည့်ပြီး ဖော်ပြ ခံခဲ့ရတယ်။
စာတမ်း ဖော်ပြ ခံရပြီး တပတ်ကျော် ကျော်ကြာတော့ တက္ကသိုလ်က အင်္ဂလိပ်စာ ပါမောက္ခသစ် ဆရာကြီး ရုဒ် (W.W.Rhodes) က ဆရာ့ စာတမ်းကို သဘော ကျကြောင်း၊ ပုဂံ လမ်းက သူ့ နေအိမ်ကို စနေ နေ့မှာ လ္ဘက်ရည် သောက်လာ ပါလို့ စာရေးပြီး မှာတယ်။ ဆရာလည်း စနေ နေ့မှာ အရောက် သွားတယ်။ ဆရာ့ကို ရုဒ်က လက်ဖက်ရည် တိုက်ပြီး၊ စာတမ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးတယ်။ ဆရာက မတတ်ဘဲနဲ့ ဖြီးဖြန်း ရေးတယ်လို့ ထင်ဟန် တူပါရဲ့။ ကဗျာ ဆရာ ရှယ်လေး၊ ကိ၊ ဘိုင်ရွန်တို့ အကြောင်း မေးတယ်။ ဆရာ နှစ်သက် ခဲ့တဲ့၊ဆရာ လေးစား ခဲ့တဲ့ ကဗျာ ဆရာ တွေပဲ မို့လား။ ကောင်းကောင်း ပြန်ပြော ပြလိုက်တယ်။ စကား ပြောလို့ ကျေနပ် တော့မှ ဆရာက ပြန်မယ် နှုတ်ဆက်တော့ ရုဒ်က 'အင်္ဂလိပ်စာ ဌာနမှာ ကျူတာ ပေးမယ်။ M.A တက်ပါလို့' တိုက်တွန်းတယ်။ ဆရာ့ ဆန္ဒ ကတော့ မတက် ချင်ဘူး။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော် ဆရာကြီးကို တိုင်ပင် ပါဦးမယ်။ ဆရာကြီးက ခွင့်ပြုရင် လုပ်မယ်လို့ ပြောပြီး ပြန်ခဲ့ ရတယ်။
ဆရာ ဇော်ဂျီနှင့် ရွှေပြည်စိုး[ပြင်ဆင်ရန်]
ဆရာ ဇော်ဂျီနှင့် လက်ရွေးစင် ကဗျာ စကားပြေ[ပြင်ဆင်ရန်]
အလယ်တန်း မြန်မာ ကဗျာ လက်ရွေးစင် ပြဋ္ဌာန်းချက် စာအုပ်တွင် ဆရာ ဇော်ဂျီ၏ 'တို့တိုင်းပြည်'၊ 'လှိုင်းကလေး သင်'၊'အင်းလေး လူရည်ချွန် စခန်းမှာ' ကဗျာများ ပါဝင်သည်။ အထက်တန်း ပင်ရင်း ကဗျာ လက်ရွေးစင် ပြဋ္ဌာန်းချက် စာအုပ်တွင် ဆရာ ဇော်ဂျီ၏ 'ရှေးခေတ် ပုဂံပြည်'၊ '၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေး အတွေး'၊ 'ကမ္ဗောဇသို့'၊ 'ပဲ့နင်း'၊ 'တခုသော သင်္ကြန်ခါ'၊ 'အို တက်လူတို့'၊ 'ပိတောက်ပန်း'၊ 'ဗေဒါလမ်း'၊ 'မြက်ရိတ် သမား'၊ 'တပေါင်းမိုး'၊ အလယ်တန်း စကားပြေ လက်ရွေးစင် ပြဋ္ဌာန်းချက် စာအုပ်တွင် ဆရာ ဇော်ဂျီ၏ 'မွန်ဝန်ကြီးနှင့် မြန်မာ စကားပြေ'၊ 'ကဗျာဝိုင်း စာဝိုင်းနှင့် ကျွန်တော်'၊ 'နွေဦး ကျက်သရေ' စသော စကားပြေများ ပါဝင် ပါသည်။ ပင်ရင်း စကားပြေ လက်ရွေးစင် ပြဋ္ဌာန်းချက် စာအုပ်တွင် ဆရာ ဇော်ဂျီ၏ 'ကေတု မတီ'၊ 'ပုဂံဈေး' စကားပြေ နှစ်ပုဒ် ပါဝင် ပါသည်။ စိတ်ကြိုက် စကားပြေ လက်ရွေးစင် ပြဋ္ဌာန်း ချက်တွင် ဆရာ ဇော်ဂျီ၏ 'ဇာတိမာန် စာဆို ဦးလွန်း' စကားပြေ ပါဝင် ပါသည်။
ပြဋ္ဌာန်းချက်ပါ ကဗျာ စကားပြေများ အကြောင်း၊ အချက်အလက် ရည်ရွယ်ချက် များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆရာ ဇော်ဂျီက တပုဒ်ချင်း ရှင်းလင်း ပြောကြား ခဲ့သည်။ ဆရာ ဇော်ဂျီ၏ ပြောကြားချက် များကို တပုဒ်ချင်း တင်ပြ လိုက်ပါသည်။
ဆရာ ဇော်ဂျီနှင့် အလယ်တန်း ကဗျာများ ဝေဖန်ချက်[ပြင်ဆင်ရန်]
အင်းလေး လူရည်ချွန် စခန်းမှာ[ပြင်ဆင်ရန်]
"လူရည်ချွန်တွေ စပြီး ရွေးတဲ့ နှစ်ကပေါ့။ အင်းလေးရဲ့ သဘာဝ အလှ၊ လူရည်ချွန် တွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်၊ လူရည်ချွန် တွေရဲ့ လှုပ်ရှား ပုံလေး တွေကို မြင်တဲ့ အတိုင်း ရေးဖွဲ့ ထားတာ။ ဒီ ကဗျာထဲက ရေခြံဝင်း ဆိုတာ၊ ကျွန်းမျော တွေကို ဆိုချင်တာ။ အင်းသား တွေက ဒီကျွန်းမျော ပေါ်မှာ ခြံစိုက် ကြတာကိုး။ ကြာဖက်နင်း ဆိုတာ ငှက် အမည်ပဲ။ လက်သီးဆုပ် တဆုပ် စာလောက် ရှိတယ်။ ခြေတံ ရှည်ရှည်နဲ့ ခြေထောက် အစိမ်းရောင်၊ နှုတ်သီးက နီနီလေး၊ ကြာဖက်ပေါ် လျှောက်သွားလို့ ရအောင် ပေါ့ပေါ့ ပါးပါးလေး။ ဒါကြောင့် ကြာဖက်နင်း ငှက်လို့ ခေါ်တာ။" This poem is shown in 9th standard poem book in myanmar education.
"ဒီကဗျာကို ရေးဖွဲ့ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းရင်း ခံကို ပြောပြ ရဦးမယ်။ ၁၉၂၄ ခုနှစ်မှာ အမျိုးသား သပိတ်တွေ မှောက်တယ်။ ကျောင်းသူ ကျောင်းသား တိုင်းရဲ့ ပါးစပ် ဖျားမှာ ဝံသာနု စိတ် ရှိရမယ်။ မျိုးချစ်စိတ် ရှိရမယ် ဆိုတာ ခေတ်စား နေတယ်ပေါ့။ ဆရာ ကိုယ်တိုင်လည်း ဝံသာနု စိတ်အကြောင်း၊ တိုင်းချစ် ပြည်ချစ် စိတ်ရှိရမယ့် အကြောင်း ပြောနေ တာပဲ။ ဒီတော့ ဆရာ့ အမေက 'တိုင်းချစ် ပြည်ချစ်စိတ်' ရှိရမယ် ဆိုတာက ဟုတ်ပါပြီ။ ပုဂံကို ရောက်ဖူး ရဲ့လား၊ ပုဂံကို ရောက်ဖူးမှ တိုင်းပြည် ချစ်ရမယ် ဆိုတာ ပိုပြီး သိလာမယ်။ နားလည် လာမယ်' လို့ ပြောဖူးတယ်။ ဒီ အသိလေးက ဆရာ့ ရင်ထဲမှာ စွဲနေတယ်။
၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေး အတွေး[ပြင်ဆင်ရန်]
"'ပိတောက်ပန်း' ကဗျာ ရေးဖြစ်တာ ကတော့ ပထမနှစ် ဘီအေတန်း ကျောင်းပိတ်တော့ အိမ်ပြန် လာရတယ်။ အိမ်ခေါင်း ရင်းမှာ ပိတောက် ပင်ကြီး ရှိတယ်။ ဆရာ ကတော့ အမှတ် တမဲ့ပဲ။ မနက် အစောကြီး အိမ် ခေါင်းရင်းမှာ ဆူဆူညံညံ အသံတွေ ကြားရတယ်။ သင်္ကြန် ရက်မို့ ပွင့်နေတဲ့ ပိတောက်ပန်း တွေကို ခူးကြ၊ ချိုးကြနဲ့ကိုး။ အသံတွေ တိတ်သွားလို့ ပိတောက် ပင်ကြီးကို ကြည့်လိုက်တော့ ကိုင်းတွေက ကျိုး၊ အရွက်တွေ ကြွေနဲ့ အရုပ် ဆိုးပြီး ကျန်ခဲ့ တာကို တွေ့ရတယ်။ ဒီကနေ အတွေးတွေ ရလာတယ်။ တနှစ်မှာ တခါ ပွင့်တဲ့ ပိတောက်ကို မခူး စေချင်ဘူး။ သူလည်း သူ့ အပင်မှာ အလှဂုဏ် ဝင့်ချင် မှာပဲလို့ တွေးမိပြီး ဒီကဗျာကို ရေးခဲ့တယ်။ ပန်းတွေကို အကြောင်း ပြုပြီး ပြောခဲ့ပေမယ့် အနှိပ်စက်ခံ၊ အညှင်းပန်းခံရသူတွေ ဘက်ကို လိုက်ပြီး ရေးတာပဲ။ ကျောင်းဖွင့်တော့ (၁၉၂၈) မတ်လ တက္ကသိုလ် ကျောင်းတိုက် မဂ္ဂဇင်းမှာ 'ပိတောက်ပန်း' ကဗျာကို ပုံနှိပ် ဖော်ပြ ခဲ့တယ်။
ဆရာ စပြီး ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာ တွေက ရှေးရေး ကဗျာ တွေပဲ။ လေးဆစ် ဆိုလည်း လေးဆစ် ပုံစံ အတိုင်း။ သဖြန် ဆိုလည်း သဖြန် ဖွဲ့နည်း အတိုင်း ရေးလိုက်ရင် ပြီးသွား တာပဲ။ ခံစား စရာ မလိုဘူး။ တွေးစရာ မလိုဘူး။ ကြာတော့ စိတ်ထဲမှာ မရှိဘဲ ရေးရတဲ့ ရေးနည်း ကားတွေကို ငြီးငွေ့ လာတယ်။ အင်္ဂလိပ် ကဗျာတွေ ဖတ်၊ ရှေးရေး နည်းတွေ အတိုင်း မရေး ချင်တော့ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ 'ပိတောက်ပန်း' သံချိုကဗျာကို ရေးဖြစ်တယ်။ ရေးဖြစ်အောင် အိုင်းချင်း ပေးတဲ့ အဖြစ် ကလေး ကိုလည်း ပြောပြ ပြီးပြီ မို့လား။"
"ပြဋ္ဌာန်း စာအုပ်မှာ 'ဗေဒါလမ်း' လို့ ခေါင်းစဉ် တပ်တယ်။ ကဗျာ ပေါင်းချုပ် ထဲမှာတော့ 'သူ့ လမ်းစဉ်' လို့ နာမည် ပေးထားတယ်။ ဒီကဗျာ တွေကို စရေး တုန်းက ဗေဒါလမ်း (၁) (၂) (၃) ဆိုပြီး ခေါင်းစဉ် တပ်တယ်။ တပုဒ်နဲ့ တပုဒ် ကွဲပြား စေချင်လို့ ။ ကဗျာ ပေါင်းချုပ်သစ် စာအုပ်မှာ စပြီး နာမည်တွေ ပေးလိုက်တယ်။ သိပြီး ကြတဲ့ အတိုင်း ဖျာပုံကို သင်္ဘောနဲ့အပြန် တွေ့ရတဲ့ ချောင်းထဲ မြောင်းထဲ ကနေ မြစ်ထဲကို စုန်လာ ဆန်လာတဲ့ ဗေဒါ တွေရဲ့ သတ္တိကို သတိ မူမိပြီး လူ့ ဘဝနဲ့ ယှဉ်တဲ့ အတွေးနဲ့ ဗေဒါလမ်း ကဗျာစုကို ရေးဖွဲ့ ဖြစ်တာပဲ။ (၁၉၅၉-၆ဝ) တက္ကသိုလ် နှစ်လည် မဂ္ဂဇင်းမှာ စပြီး ဖော်ပြ ထားတယ်။"
"၁၉၃၅၊ ဂန္ထလောက မဂ္ဂဇင်းမှာ ပါတာ ဆိုတော့ မဟာ ဝိဇ္ဇာ တက်တုန်း ကလို့ ထင်ပါရဲ့။ အောက်တိုဘာလ အားရက်မှာ အိမ် မပြန် ကြဘူး။ မဟာဝိဇ္ဇာသမားတွေ စုပြီး စာကျက်ကြ၊ ရုပ်ရှင် ကြည့်ကြ တာပေါ့။ တကောင်းဆောင် အရှေ့ဘက် အောက်ထပ် အစွန်ဆုံး အခန်း အနောက်ဘက် ခြမ်းမှာ နေတုန်း တနေ့ မနက် မြက်ရိတ်သမား ကုလားကြီးကို တွေ့ရတယ်။ ကဗျာ့ အဓိပ္ပာယ် ကတော့ လူသာလျှင် ပဓာနပေါ့။ မြေပြင်က လှတယ်။ ကောင်းကင် ကလည်း လှပါတယ်။ ချိုးသံ ကလေးတွေ ကလည်း သာယာ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူသားက ပိုလှ တယ်လို့ ရှင်းရှင်းလေး ရေးဖွဲ့ ထားတာပါ။"
"ဒီကဗျာက (၁၉၃၆)ခုနှစ်၊ မဟာ ဝိဇ္ဇာတန်း ဆက်တက်တဲ့ အချိန်က ရေးခဲ့တာ။ အဲဒီတုန်းက ဆရာတို့ တကောင်းဆောင်မှာ နေရတယ်။ တကောင်းနဲ့ ပြည်ဆောင် ကြားမှာ ဥယျာဉ်လေး ရှိတယ်။ အချိန်က တပေါင်းလ ဆိုတော့ ငုဝါ တွေက တပင်လုံး ထိန်နေအောင် ပွင့်လို့ တပေါင်းလ ရွာတဲ့ မိုး ဆိုတာ ကလည်း မရွာချင့် ရွာချင် ခပ်ဖွဲဖွဲလေး၊ မိုးစက်ကြောင့် ငုလေးတွေကြွေတယ်။ မြေပြင် မြက်ခင်းပြင်မှာ ထိန်ထိန်ဝါလို့ပေါ့။ ဒီအလှအပလေးတွေ မြင်တော့ ကဗျာမှာပါတဲ့အတိုင်း ဘယ်ဆီလွမ်းရမှန်းမသိအောင် ခံစားရတယ်။ ထူးခြားတဲ့ အလှအပလေးကို ရေးဖွဲ့ထားတာပါ။"
မွန် ဝန်ကြီးနှင့် မြန်မာ စကားပြေ[ပြင်ဆင်ရန်]
"အဲဒါက ဆောင်းပါးပါ။ စာပေ ဆောင်းပါးပါ။ (၁၉၃၇) ခုနှစ် လောက်က ဟံသာဝတီ သတင်းစာမှာ ကိုဝန် (မင်းသုဝဏ်)နဲ့ တလှည့်စီ ရေးခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါး တွေပေါ့။ စာပေ လောက ဆိုတဲ့ စာအုပ် ထဲမှာ ထပ်ပြီး ရိုက်နှိပ် သေးတယ် မဟုတ်လား။ မွန် ဝန်ကြီး ဒညား ဗလနဲ့ သူရေးတဲ့ စကားပြေ ဟန်ကို သိစေ ချင်လို့ သုံးသပ် ပြထား တာပါ။ "
ကဗျာဝိုင်း စာဝိုင်းနှင့် ကျွန်တော်[ပြင်ဆင်ရန်]
"(၁၉၄၈-၄၉) လောက်က ရေးတယ်လို့ ထင်တယ်။ ဘယ် မဂ္ဂဇင်းမှာ ဦးဆုံး ဖော်ပြ ခဲ့လဲ ဆိုတာတော့ မေ့နေတယ်။ 'ကံ့ကော်မြိုင် စာတမ်း' ထဲမှာ ထပ် ဖော်ပြ ထားသေးတယ်။ ကဗျာဝိုင်း စာဝိုင်း ထဲမှာ ဝါသနာ တူသူတွေ စုပြီး ကဗျာ အကြောင်း စာ အကြောင်းကို ပြောတယ်။ တယောက် မှားရင် တယောက် ကပြင်၊ တယောက်နဲ့ တယောက် အယူအဆ မတူရင် ငြင်း၊ ဒါ ကဗျာဝိုင်းရဲ့ သရုပ် ပဲပေါ့။ ပြဋ္ဌာန်း စာအုပ် ထဲမှာ အဆုံးထိ မပါဘူး။ ဆရာက နောက်ဆုံး အဆုံးသတ်မှာ လောကမှာ အရူး အမျိုးမျိုး ရှိတယ်။ ငွေရူး၊ စာရူး စသဖြင့် ပေါ့လေ။ ဒီထဲမှာ စာရူး ရူးနေ ရတာ အကောင်းဆုံးပဲ။ စာရူးပဲ လုပ်ချင်တယ်လို့ ရေးထားတယ်။ ဒီအကြောင်း အထိ ပါမှ ဆောင်းပါးက ပိုပြီး ပြည့်စုံ တာပေါ့။ ပြဋ္ဌာန်းချက်ထဲ ထည့်တော့ ဘာလို့ ချန်ထားခဲ့လဲ မသိဘူး။ 'ကဗျာဝိုင်း စာဝိုင်း' ဆောင်းပါးတခုလုံးမှာ ပြောချင်တာက လူတွေဟာ အပေး အယူနဲ့ စကားပြော ကြတယ်။ သူတမျိုး ငါတမျိုး ပြောတတ် ကြတယ်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် စာနဲ့ ပေနဲ့ စကား ပြောရတာ အပြစ် ကင်းတယ်။ ဆရာ လိုချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဒီအချက် နှစ်ချက်နဲ့ တွန်းအား ပေးထားတယ်။ အိုင်ချင်း ဖွဲ့ထားတယ်။"
"'နွေဦး ကျက်သရေ' ကို (၁၉၅ဝ) ပြည့်နှစ် ရှုမဝ မဂ္ဂဇင်း အတွဲ (၃) အမှတ် (၃၅) ဧပြီလမှာ ဖော်ပြ ခဲ့တယ်။ ဆရာတို့ ကျောင်းသား ဘဝနဲ့ ပြည်မြို့ကို ခရီး ထွက်တုန်းက ရေ ကုသိုလ်သည် ကလေး များနဲ့ တွေ့ရတော့ ဒီအတွေးကို ရတယ်။ မြန်မာ တို့ရဲ့ စရိုက်၊ မြန်မာ တို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို ဖော်ထုတ် ရေးထား တာပါ။ ရေ ကုသိုလ်သည် ကလေး တွေနဲ့ တူတဲ့ ရေချမ်းစင်၊ နွားလွှတ် ပွဲတွေ ကလည်း ဒီသဘောပဲ။ တွေ့တယ် မို့လား ဆရာ ရေးတဲ့ 'တခုသော သင်္ကြန်ခါ' မှာ နွားကြီးကို အမွှေး နံ့သာ နဲ့ပက်၊ သပြေပန်း၊ ပိတောက် ပန်းတွေ ချိုမှာ ချည်၊ ကော်ဇောကြီး လွှမ်းပေးပြီး နွားကို ဘေးမဲ့ လွှတ်တော့ ဒီနွားကြီး သိပ်ပျော် မှာပဲလို့ နွားကြီး စိတ်ထဲ အခဲသား ဝင်ချင်စိတ် ပေါ်လာတယ်။ အဲဒီ တုန်းက မလွတ်လပ် သေးတော့ နွားကြီး လွတ်လပ် တာကို အားကျ မိတယ်။ ဒါတွေဟာ လူ့ ယဉ်ကျေးမှုကို ဖော်ဆောင် တာပဲ။ မြန်မာ့ စိတ်ထားနဲ့ မြန်မာ့ စိတ်ဓာတ်ကို ပြတာပဲ။ ပြဋ္ဌာန်း စာအုပ် မှာတော့ 'ရေချမ်းစင်' ထိပဲ ပါတယ်။ နွားလွှတ်ပွဲ အကြောင်း ထည့်ထားတာ မတွေ့ ရဘူး။"
"'ကေတုမတီ' က ခရီးသွား ဆောင်းပါးပါ။ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် တောင်ငူ ခရိုင် အသင်းက (၁၉၅၈-၅၉) ထွက်တဲ့ နတ်သျှင်နောင် မဂ္ဂဇင်း ထုတ်တော့ ရေးပေး ခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါး ပေါ့။ ဒီ ဆောင်းပါးကို မြဝတီ မဂ္ဂဇင်း ထည့်ချင်လို့ ဆရာ့ဆီ ခွင့်ပန်လို့ (၁၉၅၈) နိုဝင်ဘာလ အတွဲ (၇) အမှတ် (၂) မြဝတီ မဂ္ဂဇင်းမှာ ထပ်ပြီး ဖော်ပြ ခဲ့တယ်။ ရှင်းပါတယ်။ ဆောင်းပါးက တောင်ငူရဲ့ အတိတ် သမိုင်းကို အသက် ပြန်သွင်း ထားတာ။ ဆရာက တောင်ငူမှာ အခုတွေ့၊ အခု မြင်နေရတာတွေထက် အတိတ်ကတော့ ဒီ နေရာမှာ ဒီလိုပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒီမှာတော့ ဒီလိုများ ဖြစ်နေ မလား ဆိုတဲ့ မှန်းဆ စိတ်နဲ့ ကြည်နူး ချင်တယ်။ သတိရ ချင်တယ်။ ဒါကြောင့် ဒွါရဝတီ ရောက်လို့ လောကုတ္တရာ ဘုရားကို ဖူးမြှော် အဓိဌာန် ပြုလေ မလားလို့ တွေးချင်ချင် ဖြစ်လာတယ်။ လေးကျွန်းကန်ကို မြင်တော့ တပင်ရွှေထီး၊ အမတော် သခင်မကြီး၊ ဘုရင့်နောင် မင်းတို့ ငယ်စဉ်က ဒီရေကန်မှာ ကစားကြ ပျော်ရွှင် ကြမှာ ပဲလို့ တွေးချင်ချင် ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီ အတွေး တွေကို 'ကေတုမတီ' မှာ ထည့်ရေး ထားတယ်။ အတိတ်ကို လှမ်းပြီး လွမ်းကြည့် တာပေါ့။ ဖတ်ရတဲ့ သူတွေ အဖို့ အတွေးသစ်ကို ရစေ တာပေါ့။"
"'ပုဂံဈေး' က ဝတ္ထုပါ။ (၁၉၃၃) ခု၊ ဂန္ထလောက မဂ္ဂဇင်း၊ အတွဲ (၈) အမှတ် (၁ဝ၈) ဇန်နဝါရီ လတွင် ဦးဆုံး ဖော်ပြ ခဲ့တယ်။ စစ် မဖြစ်မီ ကပေါ့။ (၁၉၄၈) မေလမှာ တာရာ မဂ္ဂဇင်း အတွဲ (၂) အမှတ် (၂) မှာ တခါ ထပ်ပြီး ဖော်ပြ ဖူးတယ်။ 'ရှိ၍ မရှိသူ၊ မရှိ၍ ရှိသူ' ဆိုတဲ့ ပြဿနာ လေးကို အကြောင်း ပြုပြီး ရေးခဲ့ တာပါ။ 'ဇော်ဂျီ၏ စာ' ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာ စာတပိုဒ် ကျန်ခဲ့တယ်။ ကျောင်းသုံး စာအုပ် ကော်မတီက ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ ပင်ရင်း စကားပြေ စာအုပ် မှာတော့ အပြည့်အစုံ ပါတယ်။ ကျန်ခဲ့တဲ့ စာပိုဒ်က ဘာသာပြန်တဲ့ သူက ကျန်ခဲ့တာ ထင်ပါရဲ့ ။ အဲဒီ နောက်ဆုံး ပိုဒ်ကလေး ပါမှ၊ 'ပုဂံဈေး' က ပိုပြီး ပြည့်စုံ၊ ပိုပြီး ထိရောက်၊ ပိုပြီး အဓိပ္ပာယ် ရှိတာပေါ့။
ကျန်ခဲ့သော စာပိုဒ်မှာ 'ဈေးသို့ ရောက်သဖြင့် ပုဂံဈေး လုလင်သည် မိမိ လှည်း ရှိရာ ဘက်သို့ မျှော်ကြည့် လိုက်၏၊ လှည်းပေါ်တွင် တယောက်ထဲ တိတ်ဆိတ်စွာ ငိုယို လျက် နေသော မိမိ၏ ဇနီး သည်ကို မြင်လေရာ စိုးရိမ် ကြီးစွာဖြင့် ဇနီးသည် ထံသို့ ပြေးဝင်လေ သတည်း။'
ဒီ 'ပုဂံဈေး ဝတ္ထု' ကို ရေးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ကတော့ ပညာ ဆိုတာ စာအုပ်ထဲ မှာသာ ရှိတာ မဟုတ်ဘူး။ လောက ပတ်ဝန်းကျင် ထဲမှာလည်း ရှိတယ် ဆိုတာ သိစေ ချင်တယ်။ ဘဝ အတွေ့အကြုံ နဲ့သာ လောက ပုစ္ဆာ တွေကို အဖြေ ရှာလို့ ရတယ်။ စာအုပ်ကြီး ထဲက အတိုင်း လုပ်လို့ မရဘူး ဆိုတဲ့ သဘောကို နားလည် စေချင်လို့ ရေးတယ်။ တွေ့မိ သတိထား မိလား။ လူ့ ဘဝကို ဘာနဲ့ ပြထား သလဲ၊။ ပုဂံဈေး မို့လား၊ ဟုတ်တာပေါ့။ ပုဂံ ဈေးဟာ လူ့ ဘဝပဲ။ ဒါကို လေးနက် စေချင်လို့ 'ပုဂံဈေးသည် လူ အမျိုးမျိုး၊ လူ အစားစားတို့ ကျက်စားရာ နေရာ ပေတည်း။ ရယ်သံ၊ ငိုသံ၊ ရန်ဖြစ်သံ ညည်းညူ သံတို့ အုတ်အုတ် ကျက်ကျက် မြည်ဟည်းသော နေရာ ပေတည်း။ အသွား အလာ အပြေး အလွား တို့ဖြင့် လှုပ်ရှား နေသော နေရာ ပေတည်း' ဆိုတာကို (၂) နေရာမှာ ထည့်ထားတာ သတိ ထားမိကြ မှာပေါ့။"
ဇာတိမာန် စာဆို ဦးလွန်း[ပြင်ဆင်ရန်]
"ဒီ ဆောင်းပါး ကလည်း ဟံသာဝတီ သတင်းစာ ထဲမှာ ရေးခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါး ပါပဲ။ စာဆိုကြီး ဦးလွန်းရဲ့ စာတွေ ထဲက ဇာတိမာန်ကို ဖြစ်ပေါ် စေတဲ့ စာတွေ ကဗျာတွေ လေးချိုး တွေကို သုံးသပ် ပြထားတာ။ စာပေ လောက ဆိုတဲ့ စာအုပ် ထဲမှာလည်း ထည့်သေးတယ် မှုတ်လား။"
"ဘိလပ်က ပြန်လာတော့ သူရိယ သတင်းစာ (၁၉၄၁) ခုမှာ 'လန်ဒန် ဆောင်းပါး' ဆိုပြီး ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ စနေ နေ့တိုင်း ရေးတယ်။ ဆောင်းပါး တွေတော့ အများကြီးပဲ။ စစ်အတွင်း တုန်းက ပျောက်ပျက် ကုန်တာ တွေလည်း ရှိတယ်၊ အခု ကိုဝန် (မင်းသုဝဏ်) နဲ့ တွဲထုတ်တဲ့ 'ခရီးသည်' မှာ ဆောင်းပါး (၁၅) ပုဒ်ပဲ ပါတယ်။ (၆) ပုဒ် ကျန်ခဲ့ သေးတယ်။ တိုက်က လာတောင်း တုန်းက လက်လှမ်း မှီသလောက် ရှာပေး လိုက်တာ။ ဆရာ အနေနဲ့ ခရီးသွား ဆောင်းပါး ရေးတဲ့ အခါ တချို့ သူတွေလို တနေရာမှာ တွေ့တာကို မှတ်ပြီး ရေးတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ အကြိမ်ကြိမ် သွား အကြိမ်ကြိမ် ကြည့်တယ်။ လေ့လာတယ်။ အဲဒီ အတွက် ခေါင်းစဉ် တခု ရွေးတယ်။ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ညီညွတ်အောင် စီကာ စဉ်ကာ ရေးတယ်။ အကောင်းအဆိုး ကိုလည်း ကိုယ့် တိုင်းပြည်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး အမှန်အတိုင်း တင်ပြတယ်။ ဆရာ့ ခရီးသွား ဆောင်းပါး တိုင်းမှာ ကောက်ချက် တခုခုကို ချပေးပြီး စာဖတ် သူတွေ အကျိုး ရှိအောင် ရေးတယ်။"
မဟာ ဆန်ချင်သူ ပြဇာတ်[ပြင်ဆင်ရန်]
"'မဟာ ဆန်ချင်သူ ပြဇာတ်' ကို ပုံနှိပ်တာ (၁၉၃၄) ရေးပြီးတဲ့ နှစ်ကတော့ (၁၉၃ဝ) ပြည့်နှစ်ပါ။ ဒီပြဇာတ် ရေးဖြစ် တာကလည်း ဆရာ့ရဲ့ အဘိုးကြောင့် ရေးဖြစ်တာ။ ဘီအေ အောင်တော့ ဆရာက ဘွဲ့လက်မှတ် ကလေး ကိုင်ပြီး ဆရာ့ အဘိုးကို သွားကြွား တာကိုး။ အဘိုးက အောင်လက်မှတ်လေး ကြည့်ပြီး 'အင်္ဂလိပ် မင်းက ပေးတဲ့ ဘွဲ့ဆို တော့လည်း ကောင်းတော့ ကောင်းမှာပေါ့။ ငါ့မြေး ဘီအေ ဘွဲ့ရတာ ကတော့ ဟုတ်ပါရဲ့ ။ အဲဒီ ရတဲ့ ဘွဲ့က အင်္ဂလိပ် ပညာ ဘာ ကောင်းလည်းလို့ အဘိုး သိလာအောင် လုပ် မပေး နိုင်ဘူးလား' လို့ ပြောတော့ တာပါပဲ။ အဘိုးက မြန်မာစာ နိုင်ပေမယ့် အင်္ဂလိပ်စာ မတတ်ဘူး။ အထင်လည်း မကြီးဘူး။
အဲဒီလို အဘိုးက ပြောလိုက်မှ ဆရာလည်း 'ဟုတ်ပါရဲ့၊ ငါတတ်တဲ့ ပညာနဲ့ အဘိုးကို သိအောင် ငါ ဘာလုပ် ပေးနိုင်မလဲ' လို့ နေ့နေ့ညည စဉ်းစား မိလာတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဆရာက ပြင်သစ် ဆရာကြီး မိုးလျဲရဲ့ 'The Woud Be Gentleman' (မဟာ ဆန်ချင်သူ) ကို ဖတ်နေ တာကိုး။ ဖတ်ရင်း ကနေ သိပ်သဘောကျလာတယ်။ ဇာတ်လိုက်ကြီး Jourdain (ဦးရွှေနှောင်း) ကဖြင့် ဆရာတို့ အရပ် ထဲက ဘယ်သူနဲ့ တူလိုက်တာ၊ အရပ်ထဲက ဘယ်သူကြီး ကဖြင့် ဒီ ဇာတ်လမ်း ထဲက ဇာတ်လိုက်ကြီးနဲ့ တူလိုက် တာရယ်လို့ နှိုင်းယှဉ် ကြည့်ရင်း သဘော ကျလာတယ်။ ဒီတင်ပဲ 'ဒီ စာအုပ်ကို ငါ့အဘိုး အတွက် ဘာသာ ပြန်မယ်' ဆိုပြီး ဘာသာ ပြန်တယ်။ (၇)ရက်ပဲ ကြာတယ်။ 'မဟာ ဆန်ချင်သူ' ကို ရေးပြီး အဘိုး နေတဲ့ လယ်ထဲကို သွားပို့တယ်။ အဘိုး မရှိလို့ အဘွားဆီ ပြဇာတ် စာအုပ်ကို ထားခဲ့တယ်။
နောက် (၇) ရက်လောက် ကြာတော့ တခါ သွားမေး ပြန်တယ်။ အဘိုး မရှိ ပြန်ဘူး။ ဒါနဲ့ အဘွားကို 'အဘွား ကျွန်တော် ပေးတဲ့ စာအုပ် အဘိုး ဖတ်တာ တွေ့ရဲ့ လားဗျ' လို့ မေးတယ်။ အဘွားက ဖတ် မဖတ်တော့ မသိဘူး နင့်အဘိုး အိပ်ခန်း ထဲမှာ နင့် စာဖတ်ပြီး တခွိခွိနဲ့ ပါပဲ။ ပြီးတော့ ပြောသေးတယ် နင့်မြေး ရေးထားတာ ရယ်စရာ တော်တော် ပါတယ်လို့ အဘွားက ပြန်ပြော ပြတယ်။ ဟာ ဒါလည်း စာမေးပွဲ တခု အောင်တာပဲ ဆိုပြီး ဆရာလည်း ဝမ်းအသာကြီး သာသွားတယ်။
အဘိုးနဲ့ နောက်ကျမှ တွေ့လို့ မေးကြည့်တော့ 'အေး မင်းတို့ အနောက်နိုင်ငံသား စာတွေက ရေးရေးတော့ အရှိသား' လို့ ပြောဖော် ရတယ်။ ဆရာ့ အဘိုးက တော်တော် ရှေးဆန်တယ်၊ ကမ္ဘာကြီး လုံးတယ် ဆိုတာကို သေသည်အထိ လက် မခံဘူး။ 'ကမ္ဘာကြီး လုံးနေရင် ငါတို့ လိမ့်ကျ ကုန်မှာပေါ့' ဆိုပြီး အဲဒီ အယူ အဆကို လက်မခံဘူး။
ဆရာ့ရဲ့ မဟာ ဆန်ချင်သူ ပြဇာတ်ကို (၁၉၃၃-၃၄) မှာ ပြန်စိစစ်ပြီး ညီဖြစ်တဲ့ သူ့ရဲ့ ပုံနှိပ် စက်မှာ အပ်တယ်။ ဒါကြောင့် (၁၉၃၄) မှာ စာအုပ် ဖြစ်လာ တာပေါ့။"
'ခရီးသည်' နှင့် 'မဟာ ဆန်ချင်သူ' ပြဇာတ်မှာ ပြဋ္ဌာန်းချက် စာအုပ်တွင် မပါ ဝင်ပါ။ ဆရာ ပြောပြ၍ မှတ်သား တင်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆရာ ဇော်ဂျီနှင့် စာဖတ်ဝိုင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
"ဆရာ့ အဘိုးတို့ အမေတို့ ခေတ်က ဖျော်ဖြေ စရာ ဆိုလို့ စာအုပ်နဲ့ ရုပ်သေးပဲ ရှိတယ်။ အဘိုးက တပတ်ကို တခါ စာဖတ် ဝိုင်းလေး စီစဉ်တယ်။ ကလေးတွေ စုပြီး စားကောင်း သောက်ကောင်း ကျွေး 'မင်းက ဒါဖတ်၊ မင်းက ဒါရွတ်' ဆိုပြီး သခင် ကိုယ်တော်မှိုင်းရဲ့ လေးချိုးတွေ ဖတ်ခိုင်း တာပဲ။ ဖတ်ပြ နေတုန်းကို ကောင်းကောင်း နားထောင် ရတယ်။ ဆရာတို့ အမေဆို 'ကိုးခန်းပျို့' ကို အလွတ် ရတယ်။ စုံနံ့သာမြိုင် ဦးကြော့ရဲ့ စာတွေ၊ ပြဇာတ် တွေကို များများ ဖတ်ရတယ်။ ဒီအလေ့ အကျင့်က ဆရာတို့ အိမ် တအိမ် ထဲတင် မဟုတ်ဘူး။ တခြား အိမ်တွေ မှာလဲ ဒီလို စာဖတ် ဝိုင်းတွေ ရှိတာပဲ။ ပေါ်လာတဲ့ ပြဇာတ် စာအုပ် မှန်သမျှ အကုန် ဖတ်ကြ တာပဲ။ ပြဇာတ် ထဲမှာ ပါတဲ့ ဇာတ်ဆောင် ဦးရေ အလိုက် တယောက် တမျိုး တာဝန် ယူပြီး၊ ပြဇာတ် ခင်းကြ တာပဲ။ နားထောင်တဲ့ သူတွေ ကလဲ နားထောင် လို့ပေါ့။ ဆရာနဲ့ စာ၊ ကဗျာဟာ အမြဲလိုလို လက်ပွန်း တတီး ရှိခဲ့တယ်။"
ဆရာ ဇော်ဂျီနှင့် ဆရာကြီး ဦးဖေမောင်တင်[ပြင်ဆင်ရန်]
"ခေတ်စမ်း မတိုင်ခင်က ဆရာတို့ ရေးတဲ့ စာတွေ၊ ကဗျာ တွေကို ဘယ်မဂ္ဂဇင်း တိုက်ကမှ လက်မခံ ပါဘူး။ အဲဒီ ခေတ်တုန်းက ရှေးရိုး ကဗျာ တွေပဲ တွင်ကျယ် နေတာ ဆိုတော့ ဆရာ့ ကဗျာကို စာနယ်ဇင်း တွေက နားမလည် ကြဘူး။ ဒါနဲ့ ဂန္ထလောက မဂ္ဂဇင်း ထူထောင် ဖြစ်တယ်။ ငွေ ၁ဝဝဝိ- လောက်နဲ့ စထူ ထောင်တယ်။ ဆရာတို့ ရေးကြ သားကြ ပေမယ့် ပိုက်ဆံ မရပါဘူး။ ငွေကြေးကို ဂရု မစိုက်ဘူး။ နောက် ဆရာကြီး ဦးဖေမောင်တင်ရဲ့ လုံ့လကြောင့် ခေတ်စမ်း ကဗျာ၊ ခေတ်စမ်း ဝတ္ထုတွေ ပေါ်လာတယ်။ ခေတ်စမ်း စာပေဟာ ဆရာကြီး ကျေးဇူးကြောင့် ပေါ်ပေါက် လာတာပါ။ ခုထိ ခေတ်စမ်းရဲ့ အရှိန် အဝါဟာ မကုန် သေးပါဘူး။ ခေတ်စမ်းရဲ့ အငွေ့အသက် တွေက ကနေ့ထိ လွှမ်းမိုး နေတုန်းပါ။ တွေ့နေ ရတုန်းပါ။ ခေတ်စမ်း စာပေကို ဆရာ တို့က ထွင်မယ် ဆိုပြီး စာရေးတာ မဟုတ်ဘူး။ ဆရာ တို့ရဲ့ စာတွေကို 'ခေတ်စမ်း' လို့ အမည် ပေးလိုက်မှ ခေတ်စမ်း စာပေ ဖြစ်လာ တာပါ။ ခေတ်စမ်း စာပေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဝေဖန်ကြ၊ တိုက်ခိုက်ကြ၊ ကလော်ကြ၊ ဆဲကြတော့ ဆရာတို့ သိပ်ဝမ်းသာ တာပေါ့။
ဆရာ တို့က မဟုတ် တာတွေ လုပ်နေ တာမှ မဟုတ်ဘဲ။ သူတို့ တတွေက အသစ် ထွင်တာကို အပြစ် တင်တာ၊ ရှုတ်ချ တာတွေကြောင့် စာဖတ် သူတွေ ပိုပြီးတော့ စိတ်ဝင်စား လာတာကိုး။ ဆရာဖြင့် အဲဒီ တုန်းက သိပ်ဝမ်းသာ တာပဲ။ သိပ္ပံ မောင်ဝရယ်၊ ဆရာရယ်၊ ကိုဝန်ရယ်၊ စာနယ်ဇင်း တွေကနေ 'မောင်ကကြီး'၊ 'မောင်ဏကြီး'၊ 'မောင်တဝမ်းပူ' ဆိုတဲ့ ကလောင် နာမည် တွေနဲ့ တပျော် တပါးကြီး၊ ပြန်ရေး ခဲ့တယ်။ ရှေးရိုး နှစ်ခြိုက် သူတွေကို 'ခင်ဗျားတို့ ဥဩလေး သာတယ် သာတယ်လို့ ပြောမနေ ကြနဲ့ ကြက်ဖ ကြီးလည်း သာတာပဲ' စသဖြင့် ပေါ့ကွာ တဖက်က ထိုးနှက် သမျှကို အမျိုးမျိုး ချေပ ခဲ့ကြတယ်။"
ချက်နိုင်ငံမှ အမျိုးသမီး စာပေသုတေသနပညာရှင် ဒဂ္ဂမာဘက်ကိုဗာ(မြန်မာအမည်-မြသီတာ)[ပြင်ဆင်ရန်]
“ဆရာဇော်ဂျီ၏ စာပေ အမြင်နှင့် ဆရာ ဇော်ဂျီ၏ စာပေ အမြင်များတွင် မြန်မာ့ ရှေးဟောင်း စာပေ ကျမ်းဂန် များကို အလေးအနက် သုံးသပ်မှုကို တွေ့ရသည်။ အင်္ဂလိပ် စာပေနှင့် ကမ္ဘာ့ စာပေကို ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် လေ့လာ သုံးသပ်ချက် တို့လည်း တွေ့ရသည်။ တက္ကသိုလ် ဝန်းကျင်၏ အငွေ့ အသက်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။ ဆရာ ဇော်ဂျီ၏ ပိတောက်ပန်း ကဗျာသည် ဆရာ ဇော်ဂျီ၏ စာပေကို လည်းကောင်း၊ ၂၀ ရာစု မြန်မာ ကဗျာ လောက တခုလုံးကို လည်းကောင်း အပြောင်းလဲကြီး ပြောင်းလဲ စေသည့် ကဗျာ ဖြစ်သည်။ ဆရာ ဇော်ဂျီ၏ ကဗျာများ၊ ဝတ္ထု တိုများ၊ ပြဇာတ် များသည် လူ့ သဘော သဘာဝကို လေးနက်စွာ ထင်ဟပ် ဖော်ပြလျက် ရှိသည်။ လေးနက်စွာ ဆင်ခြင်မှု များနှင့် ဒဿနိက ဗေဒဆိုင်ရာ ပြဿနာ များကို သူ့ စာများတွင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြ ခဲ့သည်”။
ဆရာဇော်ဂျီ၏ ကဗျာများ၊ စာပေ လက်ရာများ၊ သုတေသန စာတမ်းများကို စာပေ ပညာရှင်များ၊ သုတေသီ များ၊ ဝေဖန်ရေး ဆရာများ၊ ကဗျာ ဆရာများက တလေးတစား ချီးကျူး ဂုဏ်ပြု ခဲ့ရသည်။ စာပေပေါ်တွင် ထားရှိသော ဆရာ ဇော်ဂျီ၏ စေတနာ၊ မေတ္တာ တရားတို့သည် နှောင်းခေတ် လူငယ် စာပေသမားများ အဖို့ အတုယူဖွယ်ရာပင်။
"ဆရာ စာစ ရေးတာ ကတော့ (၁၄-၁၅) နှစ် တည်းကပါပဲ။ ရေးတယ် ဆိုတာ ကလည်း မဂ္ဂဇင်းတွေ ပို့မယ် ဆိုပြီး ရည်ရွယ် ရေးတာ မဟုတ်ဘူး။ ဆရာတို့ ငယ်ငယ်က နေရတဲ့ အမျိုးသားကျောင်း ဆိုတာ ကလည်း ကဗျာတွေ၊ လင်္ကာတွေ သင်ပေး နေတော့ စာပေ ဆိုတာ ဝါသနာ မပါလို့ မရတော့ ဘူးပေါ့။ ဆရာ တို့ကို ကဗျာ သင်တဲ့ ပင်စင် ဆရာဟောင်းက သံပေါက် တခုကို (၃)လလောက် သင်တယ်။ သံပေါက် အမျိုးမျိုး အကြောင်းကို သင်ပေးတယ်။ ဆရာတို့ ကလည်း သံပေါက်တွေ အမျိုးမျိုး ရေးရတယ်။ တနင်္ဂနွေ တပတ်ကို သံပေါက် တပုဒ် ရေးပြီး ပြရတယ်။ အတန်း ထဲမှာလည်း ထဖတ်ပြ ရတယ်။ မှားနေရင် ပြင်ပေးတယ်။ ဒါကြောင့် ကဗျာရေးရင် လက်က ယောင်လို့တောင် မမှားဘူး။ ဆရာတို့ စာရေး တာက နားနဲ့ စာရေးတာ၊ နားက သေချာ သိနေတော့ မမှား တော့ဘူးပေါ့။ ဖျာပုံမှာ နေရင်း ရေးတဲ့ လေးဆစ်တွေ၊ သဖြန်တွေ၊ ဘောလယ်တွေ ဆိုတာက ကာရန် အထူး စဉ်းစားဖို့ မလိုဘူး။ အလိုလို ထွက်လာ တာပဲ။ ရန်ကုန် ရောက်မှ မဂ္ဂဇင်း တွေမှာ ရေးတယ်။ ရေးနည်းကား အတိုင်း ရေးတဲ့ ကဗျာတွေ ဆိုတော့ စိတ်ထဲမှာ မရှိဘဲနဲ့ (မခံ စားရဘဲ) လည်း ရေးလို့ ရတယ်။ ဒီလို ကဗျာတွေ စုစုပေါင်း (၃ဝဝ) ကျော် ရှိတယ်။ ပျောက်ပျက် ကုန်ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဝမ်းမနည်း ပါဘူး။ ဒီလို ကဗျာမျိုး တွေကတော့ ခုရေး ခုရ တယ်လေ။ ကဗျာ ပေါင်းချုပ်သစ်မှာ 'ရှေ့ပြေး ကဗျာစု' ဆိုပြီး အပုဒ် (၂ဝ) လောက် ပါသွားတယ်။
စရေးစဉ်က မဂ္ဂဇင်း တိုက်တွေ ပို့ရင် လက်မခံ ခဲ့ဘူး။ မကောင်းလို့ နေမှာပဲ ဆိုပြီး ဆက်ရေးမြဲ ရေးတယ်။ ပိုကြိုးစား ရေးတယ်။ ကဗျာ တွေကို ဆရာ တို့က ဝါသနာ ပါလို့ ရေးခဲ့တာ။ ထင်ပေါ် ကျော်ကြား ချင်တဲ့ စိတ်မရှိဘူး။ ဝါသနာ အရင်းခံပြီး ရေးတဲ့ သူသာ တည်တံ့ ခိုင်မြဲတယ်။ ကျော်ကြား ချင်လို့ ရေးတယ် ဆိုရင် မလွယ်ဘူး။
ခုခေတ်တော့ ကဗျာတွေ စာတွေ ရေးကြတယ်။ မဂ္ဂဇင်းတိုက် ပို့လို အပယ် ခံရရင် မကျေနပ် ကြဘူး။ ဆရာ့ ဆီလည်း စာတွေ အများကြီး လာပါတယ်။ ကိုယ့်မှာမှ ဘာမှ မရှိသေးဘူး၊ သူများ ပေးချင် တာက အရင်ပဲကိုး။ ကိုယ့်မှာ အရင် ရှိအောင် လုပ်ကြ စေချင်တယ်။ ကိုယ့်မှာ ရှိပြီးမှ သူများ ပေးရတာ ကောင်းတယ်။ စာ များများ ဖတ်ကြ စေချင်တယ်။"
ဆရာဇော်ဂျီ လေးစားသော စာဆိုနှင့် စာပေ[ပြင်ဆင်ရန်]
"ဆရာကြီး သခင် ကိုယ်တော်မှိုင်းရဲ့ စာတွေက မျိုးချစ်စိတ် ရစေပါတယ်။ (၁၉) ရာစု နောက်ပိုင်းမှာ ကျော်ကြားတဲ့ ရှယ်လေး၊ ကိ၊ ဘိုင်ရွန်တို့ရဲ့ ကဗျာတွေ၊ တဂိုးရဲ့စာ၊ ကဗျာ တွေဟာ ဆရာ့ အပေါ် စာပေ ဩဇာ သက်ရောက် တယ်လို့ ဆိုရ ပါမယ်။ အလေးစားဆုံး စာဆိုနဲ့ စာပေ ကတော့ အရွယ် အလိုက် ပြောင်းလဲ ခဲ့တာပေါ့။ ခု ဒီအရွယ် မှာတော့ နိုင်ငံခြား စာဆိုတွေ ထဲက 'ပလေတို' ကို လေးစားတယ်။ အခု ရွယ်ထိ ဖတ်လို့ ရသေးတဲ့ လက်ခံ သေးတဲ့ စာတွေ ကတော့ ကိုးခန်းပျို့၊ နတ်သျှင်နောင် ရတုတွေ၊ ဝန်ကြီး ပဒေသရာဇာနဲ့ ဦးပုညရဲ့ စာတွေ ပါပဲ။ အသက်ကြီးလို့ ဘာသာရေးကို စိတ်ဝင် စားတယ်။ ပဋိစ္စ သမုပ္ပါဒ်နဲ့ ဓမ္မ စကြာတွေ ကတော့ အယူ အဆကော ကျင့်စဉ်ပါ ပါလို့ လေးစား ပါတယ်။"
"ဆရာ ကတော့ ကျောင်းဆရာ ဘဝကို နှစ်သက်တယ်။ စာရေး နေပေမယ့် 'စာရေး ဆရာကြီး' လို့ ခေါ်လိုက်ရင် ကျော စိမ့်စိမ့် သွားတယ်။ စာရေး ဆရာ မဖြစ်သေး ပါဘူး။ ကိုယ်ရေးတာ တွေပဲ အကုန်လုံး နှစ်သက်တာပေါ့။ သဘော ကျတာပေါ့။ ကိုယ့်စာ ကိုယ် သဘော မကျ ဘယ်ရှိ မလဲ။ အနှစ် သက်ဆုံး အကျေနပ်ဆုံး ကတော့ 'ဗေဒါလမ်း ကဗျာစု' ပဲပေါ့။ အသက်ကြီးမှ ရေးတော့ ကိုယ့်အမြင်လို့ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ရှိလာပြီ။ ဒီအပြင်က ရေးတဲ့ ကဗျာတွေ မှာလည်း အမြင် ရှိပေမယ့် ဝိုးတဝါးပဲ။ 'ပဲ့နင်း' လို ဟိုလိုလို သည်လိုလို ဖြစ်နေ သေးတာ ပေါ့လေ။ ကြီးမှ ရေးတာက နှလုံး ကျနေပြီ၊ တည်ငြိမ်မှု ရှိလာ ပြီပေါ့။
ကာရန်မဲ့ ကဗျာနဲ့ ပတ်သက် လို့တော့ ရေးတတ်ရင် ကောင်းပါတယ်။ ကြိုက်ပါတယ်။ မရေးတတ်ဘဲ ရေးနေတော့ ကာရန်မဲ့ ကဗျာ မဖြစ်တော့ ဘူးပေါ့။ ဆရာ ကတော့ ကာရန်မဲ့ ကဗျာ ဆိုတဲ့ အခေါ်ကို မကြိုက်ဘူး။ ကာရန် မဲ့တဲ့နောက် ကဗျာ ဘယ်ဖြစ်တော့ မလဲ။ 'နှောင်ကြိုးမဲ့ ကဗျာ' ဆိုရင် ပိုပြီး ထိမိမယ်။ ကာရန်မဲ့ ကဗျာကို ရေးတဲ့ အခါ နိမိတ်ပုံလေး တခုကို အထူးပြုပြီး တိုတိုလေးရေး၊ တိုတိုလေးနဲ့ ထိမိအောင်ရေး၊ ရေးတတ်ရင် လက်ခံမယ်။ ကဗျာ တပုဒ် ကောင်းရင် ချက်ချင်း အလွတ် ရတယ်။ ဒီတော့ ထိမိအောင် ရေးပါ။ လက်ခံ ပါတယ်။
ဆရာ့စာပေ အယူအဆ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ ထုံးစံ တွေကို ဖော်ထုတ် ချင်တယ်။ ဆင်းရဲသားတွေ ဘက်က ရပ်တည် ချင်တယ်။ ဘဝ ဆန်သူကို ချီးကျူး ချင်တယ်။ ဘယ်သူ ကမှ စံမတင် တာကို စံတင် ချင်တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဗေဒါလမ်း ကဗျာတွေကို တအုံ တမကြီး ရေးဖြစ် တာပေါ့။ အသက်ကြီး လာတော့ ဘာသာရေး ဆန်လာတယ်။ တည်ငြိမ်မှု ရှိလာ တာပေါ့။"
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် စာအုပ်များ[ပြင်ဆင်ရန်]
ကဗျာ ပေါင်းချုပ်သစ် - ၁၉၇၄
ကာလီဒါသနှင့် သကုဏ္ဍလ - ၁၉၅၈
ခရီးသည် ( + မင်းသုဝဏ်)- ၁၉၆၅
ဂန္ထလောက သင်္ဂဟသုတိ အထိမ်းအမှတ် စာတမ်းများ - ၂ဝဝဝ
ဂျရတ်နှင့် မာဂရက်ဝတ္ထု (ဘာသာပြန်) (မဟာ ဝိဇ္ဇာ ဘွဲ့ရ မောင်သိန်းဟန် ကလောင် အမည်ဖြင့်) - ၁၉၄၁
စာပေ လောက ( + မင်းသုဝဏ်)- ၁၉၄၉
ဇော်ဂျီ ကဗျာပေါင်းချုပ် - ၁၉၆၇
ဇော်ဂျီ၏စာ - ၁၉၆ဝ
နင် လားဟဲ့ ချစ်ဒုက္ခနှင့် အခြား ဝတ္ထုတိုများ (နိုဘယ်ဆုရ-ဝတ္ထုတိုများ) (ဘာသာပြန်) - ၁၉၇၉
ပလေးတိုးနိဒါန်း (ဘာသာပြန်) (၁၉၆၇-၁၉၉၆)
ပိတောက်ရွှေဝါ ကဗျာများ - ၁၉၅၁
ပုခန်းမင်းကျော်စွာ နတ်သံနှင့် ပျော်ချင်း - ၁၉၃၈
ဗေဒါလမ်း ကဗျာများ - ၁၉၆၃
မဟာဆန်ချင်သူနှင့် အခြား တခန်းရပ် ပြဇာတ်များ - ၁၉၇၂
မဟာဆန်ချင်သူ ပြဇာတ် - ၁၉၆၅ (၁၉၃၄၊ ၁၉၇၀) ဘာသာပြန်
မိုးကြယ့်မို့လား (ဘာသာပြန်) - ၁၉၆၆
မိုးကြယ်မို့လားနှင့် နိုဗယ်ဆုရ ဝတ္ထုတိုများ - ၁၉၆၆
မိုးကြယ်မို့လားနှင့် လမ်းသစ်ဝတ္ထုတိုများ - ၁၉၇၇
ရသစာပေနိဒါန်း - ၁၉၆၅
ရသစာပေအဖွင့် - ၁၉၆၆
ရသစာပေ အဖွင့်နှင့် နိဒါန်း - ၁၉၇၆
ရွှေဒေါင်းညို (သို့) စနစ်တခု၏ အစ - ၁၉၉၉
ရှေးခေတ်ပုဂံ ကဗျာများနှင့် အခြားကဗျာများ - ၁၉၈၇
လက်ရွေးစင် မြန်မာဝတ္ထုတိုများ - ၁၉၈၁
လမ်းသစ်နှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ (ဘာသာပြန်) - ၁၉၆၆ (နိုဘယ်ဆုရဝတ္ထုတို)
သကုဏ္ဍလ (ဘာသာပြန်) - ၁၉၅၅
သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း ဋီကာ - ၁၉၅၅
သိန်းနှင့် ကျားဋီကာ - ၁၉၈၄
သုံးပွင့်ဆိုင်ခေတ် ဆန်းစာပေ (သိပ္ပံမောင်ဝ၊ မင်းသုဝဏ် တို့နှင့်တွဲ) - ၁၉၅၅
မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရ မောင်သိန်းဟန် ကလောင်အမည်ဖြင့် ဂျရတ်နှင့် မာဂရက် ဝတ္ထု (ဘာသာပြန်) - ၁၉၄၆
↑ ဖိုးအောင်လေး (စာပေဗိမာန် စာမူဆုရ) (ဧပြီ ၂၀၀၇). "ဆရာ ဇော်ဂျီနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ငုပ်ကွယ် နေတဲ့ အချက် တစ်ချက်". မဟေသီ မဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၂၆၈.
Sittathukha linkar in Burmese, Zawgyi
Maha Sanchinthu radio drama BBC Burmese, Retrieved 2006-10-17
Padauk pan in Burmese, Zawgyi, The University College Magazine, March 1928
Pahn pan lyet pè (The Hyacinth's Way) in Burmese, Zawgyi, The Owei University Magazine, 1960
A Study of the Rise of the Burmese Novel Zawgyi, Journal of the Burma Research Society, June 1968
His Spouseashort story by Zawgyi 1937 inc. audio
Now as the Padauk (For Zawgyi) Archived 13 March 2007 at the Wayback Machine. Win Pe
Interview and Poetry of U Tin Moe Archived 30 September 2008 at the Wayback Machine. Radio Free Asia, September 2000
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဇော်ဂျီ_(စာရေးဆရာ)&oldid=713778" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၀၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။